KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Mpae a Yona bɔe wɔ apataa no yam (1-9)
Apataa no kɔfee no too asaase so (10)
2 Afei Yona bɔɔ Yehowa ne Nyankopɔn mpae wɔ apataa no yam,+ 2 na ɔkae sɛ: “M’ahoyeraw mu na misu frɛɛ Yehowa, na ogyee me so.+ Ɔdamoa* yafunu mu na misu hwehwɛɛ mmoa.+ Na wutiee me. 3 Bere a wotow me too bun mu, na mekɔɔ ɛpo ase tɔnn no,Nsu* dii kyinhyia faa me ho.+ W’asorɔkye a ano yɛ den bu faa me so.+ 4 Ɛnna mekae sɛ, ‘Wɔapam me afi w’anim! Ɛbɛyɛ dɛn na matumi ahwɛ w’asɔrefi kronkron no bio?’ 5 Nsu twaa me ho hyiae ma anka mereyɛ awu;*+Subun menee me. Na nwura kyekyeree me ti. 6 Misian kɔɔ mmepɔw ase tɔnn. Ɔdamoa* apon kaa me hyɛɛ mu daa. Nanso wo, Yehowa me Nyankopɔn, wuyii me nkwa fii amoa mu.+ 7 Bere a me nkwa* refi me nsa no, mekaee Yehowa.+ Ɛnna me mpaebɔ duu w’anim, w’asɔrefi kronkron hɔ.+ 8 Wɔn a wɔde wɔn ho to abosonhunu so no, wɔpo onii a ɔda ɔdɔ a enni huammɔ adi kyerɛ wɔn no. 9 Nanso me de, mede me nne bɛda wo ase na mabɔ afɔre ama wo. Ɛbɔ a mahyɛ biara metua.+ Nkwagye fi Yehowa.”+ 10 Bere bi akyi no, Yehowa maa apataa no kɔfee Yona too asaase kesee so.
^ Anaa “Ɔhweam.”
^ Anaa “Nsu twaa me ho hyiae beduu me kra ho.”